‘आफ्नै देश र अर्थतन्त्रबारे गलत ब्रिफिङ' | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
‘आफ्नै देश र अर्थतन्त्रबारे गलत ब्रिफिङ'
मेरो १० वर्ष सार्वजनिक जीवनमै छु, तपाईहरुसँग भेट भएकै छ । तपाईहरुसँग मिडियाकै बारेमा केहि छलफल गर्न चाहान्छु । मिडिया समाजको ऐना हो, आँखा हो । आँखा बन्ने की चस्मा मात्रै बन्ने त्यो तपाईहरुको हातमा छ ।
आँखा बन्नु भयो भने जे छ सत्य त्यहि देखिन्छ । चस्मा बन्नुभयो भने जस्तोले लगायो त्यस्तै देखिन्छ ।
मेरो अनुरोध तपाईहरु आँखा हुनुस, चस्मा मात्रै नबन्नुस् । व्यवसायीक रुपमा काम गर्दै गर्दा मिडिया हाउसहरुका लागि काम गर्नुपर्छ र उहाँहरुकै चस्मा लगाईदिनुपर्ने हुन्छ । अनि त्यो चस्मा लगाउँदिन भन्दा तपाईहरुको सेवा असुरक्षित बनिदिन्छ । त्यसकारण चस्मा लगाईदिनेले पनि सोच्नुपर्छ की पत्रकारीतामा व्यवसायीकता भनेको सरकारले मात्रै हुँदैन् र सरकारले तपाईहरुलाई रोजगारी पनि दिएको छैन् ।
रोजगारी दिने र तपाईहरुलाई आवद्ध गर्नेहरु जो आफैं स्वरोजगार हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ । तर तपाईहरु जुन जुन मिडिया हाउसमा आवद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँहरुले आफ्नो विवेक, न्यायिक मन र व्यवसायीक धर्म पालना गरेर पत्रकारीता गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ आजको जोखिमपुर्ण पत्रकारीता नै त्यहि हुनेछ ।
भीडमा गएर फोटो खिच्ने अथवा हुलदंगाको न्युज ल्याउने भन्दा आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा निर्भिक भएर लेख्न सक्ने पत्रकारीतालाई मैले जोखिमपुर्ण पत्रकारीता भन्छु । त्यसमा तपाईहरु दृढ हुनुहोस शुभकामना छ ।
तर, युरोपियन र अमेरिकी मुलुकहरुले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नखेको दशकौं भयो । भारतले त्यो देखिरहेको छ । ३ देखि ३.५ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र बुम भयो भन्छन् उनीहरु । एसियाली देशहरुले २ दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर हाम्रो बानी बिगारिदिए । ८ देखि १० प्रतिशतको वृद्धि दुई दशकसम्म हासिल गरिदिनुभयो । त्यसलाई म मिराकल भन्छु । त्यो मिराकर धेरै दिन टिक्दैन् । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निश्चित समयमसम्म मात्रै हुन्छ, सधै हुँदैन् ।
विश्वव्यापी प्रकाशनहरुले पनि अविकसित अवस्थाबाट विकासशिल देश बन्छ, तब त्यो आयको ट्रयापमा आफैं पर्छ । यसलाई मिडल इनकम ट्रयाप भन्छ । किन भने ज्याला बढ्छ, मानिसले श्रम र विश्रामका बीचमा बिश्राम रोज्छन् । श्रम भन्दा बिश्रामलाई ध्यान दिएर बढी ज्याला नपाएसम्म मान्छेले काम गर्दैन् । मान्छेले धेरै आराम खोज्न थालेपछि उत्पादन घट्छ । अनि मुलुकको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घटेपछि मुलुकको निर्यात पनि घट्छ । आफ्ना उत्पादनहरु भनेजति प्रतिष्पर्धी नभएपछि अािर्थक वृद्धिमा अलिकति असर गर्छ । अहिले भारतमा पनि भएको त्यति मात्रै हो ।
अर्काे कुरा, हामीले आर्थिक वृद्धि त गर्यौ तर त्यो कसको कारणले भयो ? त्यसमा कुन कुन क्षेत्रको योगदान बढी देखियो ? कुनै एक दुई वटा उद्योगहरुले धेरै आम्दानी गरेर पो आर्थिक वृद्धि भएको हो की ? वित्तिय क्षेत्र वा उद्योग वा कृषि वा व्यापार मात्रै बढेर हो की ? भन्नेबारे छलफल गर्नु पर्छ ।
म तपाईहरुर्ला एउटा कुरा चाँही स्पष्ट साथ भन्न चाहान्छु की गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहरुहरुमा साधन र श्रोत समन्यायीक ढंगले वितरण हुन थालेपछि त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ । जगबाट नै आर्थिक वृद्धिको आधार खडा भैरहेको छ । संघीयताको सन्दर्भमा यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरिनुपर्छ । त्यसमा तथ्यांकहरुको अभाव हुन सक्छ । कहिले काँही हामीलाई भ्रम पनि हुन सक्छ । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तिनको राजश्व र बजेट छुट्टा छुट्टै छन् । साझा अधिकारका कुरा पनि छन्।
हामीले कतिपय वित्तिय संस्था र सेवाहरुलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । त्यो अर्थमा पुँजी बजारलाई पनि त्यही पुर्याउने हो । त्यसको पहिलो आधार भनेको वित्तिय क्षेत्र नै हो । २ वर्षमा बैंकका शाखा ५० प्रतिशतले बढेका छन् । डेढ बर्षको अवधीमा साढे ६ हजारबाट साढे ८ हजार पुगेछन् ।
मन्त्री हुनु भन्दा अघि बीमाको पहुँच ५ प्रतिशत भन्दा माथी पुग्यो भन्नै पाइन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेपछि अढाई करोड खाता निक्षेप बीमाको दायरामा आएका छन् । त्यसमा लघु बिमा, सावधिक बीमा, अग्नी बीमाको हिस्सा पनि निकै कम छ । बीमाको पहुँच १० प्रतिशत भयो भन्ने सुन्दा निकै हर्षित हुनुपर्ने अवस्था थियो मै अर्थ मन्त्री हुँदा । अघिल्लो आर्थिक वर्षमो १९ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको भन्ने सुनेको थिएँ ।
अहिले सुन्दै छु, त्यो २५ प्रतिशत पुग्यो रे । यो खुसीको कुरा हो । पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको कुुुरा सानो प्रगति होइन् ।
बैंकहरुको नाफा बढेको छ, बीमाको पहुँच पनि बढेको छ । त्यति धेरै बीमा कम्पनीहरु थपिँदा बजारले स्वीकार्न सक्ला त भन्ने थियो । ती कम्पनी पनि पहिलो वर्षदेखि नै नाफामा गएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र नाफामा, बीमा क्षेत्र नाफामा, उद्योगहरुको क्षमतामा अभिवृद्धि, औद्योगीक उत्पादनमा बढोत्तरी भएकै छ । सेवा क्षेत्रका अरु व्यवसाय पनि विस्तार भएकै छ । अनि तिनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने सेयर बजारमा तपाईहरुको गुनासा सुन्नु परिरहेको छ । करका विषयहरु होलान् भन्ने सुनियो । भ्याटको कुरा अर्थमन्त्री हुुनु भन्दा अघि नै नलगाउनु भनेको थिएँ ।
पुँजीगत लाभकर गणनाका विषयमा केहि दुविधा छन् । नेप्सेका जीएम यहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्पष्टसँग भनिदिएको छु । धितोपत्र बोर्डलाई पनि भनिदिएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकका हकमा पनि मैले स्पष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु नियामक हो, त्यहि अनुसार काम गर्नुस् । अर्थ मन्त्रालयलाई नियामकको पनि नियामक बनाउने मौका नदिनुस् । तपाईहरुले काम गरुञ्जेल हामी केहि गर्दैनौं । आफ्नो काम जिम्मेवारी पुर्वक गर्नुुस् । हामी तपाईलाई स्याबासी दिन्छौं ।
हस्तक्षेप गर्ने अवसर हामीलाई नदिनुस् । हामी आरोपित हुन चाहादैनौं । आफ्नो काम ढंगसँग गरुञ्जेल हामी छुँदैनौं । तपाईहरुले बल पास गर्ने काम नगर्नुस् ।
विचार/अन्तरवार्ता असोज ३, २०७५
गौतम बुद्धका १० उपदेश: जसले तपाईको जीवनप्रतिको दृष्टिकोण बदलिदिन सक्छ
विचार/अन्तरवार्ता फागुन २९, २०७५